नोभेम्बर 1, 2018 जनवरी 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment अप्रेसन, डा. राम बहादुर बोहरा
तपाईं या तपाईको कुनै साथी पायल्स रोगबाट पिडित हुनुहुन्छ, अप्रेसन गर्नु भएको छैन भने होम्योपैथीक र आयुर्वेदिक उपचारबाट आफ्नो रोग निर्मुल पार्न सक्नुहुन्छ । आजकल पायल्सलाई ठूलो समस्याको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । पायल्सको रोग हाम्रो आफ्नै लापरबाहीमध्ये एक भएकाले लापरबाहीलाई हटाई उपचार गर्नु भएमा यो रोग निको हुन्छ ।
विगत लामो अनुभव हामीले बटुलेका छौं । रोगको उपचार गर्दा बेन्ड सिस्टमबाट गर्दा पनि रोग निको नभएका थुप्रै केसहरू हामीले हेरेका छौं । फिस्चुला, फेसर, पायल्स चाहे जे नामले पुकारे पनि इसवै पायल्सका अंग हुन । पायल्सको उपचार गर्दा भएका यस्ता समस्या आफै निको हुने गरेको छ । रोगको जड भनेकै खानपिनको खराबी र आरामलाई हामीले दोषी ठहराएका छौं । यो रोगमा मरमसला, माछा मासु त्याग्नुको साथै सहि औषधिको सेवन गराउन सके यो निको हुने हाम्रो ठहर छ ।
कतिपय विरामीले हामीलाई सोध्नुहुन्छ । एकपटक औषधि खाएपछी सधै के यो रोग निको हुन्छ ? यदि हामीले खानपिनमा सुधार गर्छौं र कब्जियत बन्नबाट रोक्न सक्छौं भने औषधि नखाई यो रोग निको भएको छ । कुनै पनि रोगको उपचार औषधि मात्र होइन खानपिनमा भरपर्छ । एकपटक हामी कहाँ पाल्नुहोस यस्ता रोगको उपचार हामीले गर्छौ।
सम्पर्क फोन र मोबाइल नम्बर : ९८५७०४०२९८, ९८५७०४०४९८, ०७८४१००२९ मा सोझै सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ ।
← होम्योपैथीक औषधि र मानसिक रोग
के यसरी विकास होला त नेपालमा ? →
One thought on “विना अप्रेसन पायल्स रोगको उपचार”
Pingback:पायल्सका बिरामीहरुले के खाने के नखाने ? थाहा पाईराख्नुहोस्